Bayaan ay soo Saartay Daladda SSNL-Somaliland ee Waddanka Holland. |
Bayaan ay soo Saartay Daladda SSNL-Somaliland ee Waddanka Holland.
Somaliland Society in the Netherland
Ku: Ururada Somaliland ee Holland
Ku: Mutadawiciinta (Activists) ee Holland
Og: Guddida Qaadhaan ururinta Suuqa Waaheen
Habsami u socodka Hawlaha Qaadhaan ururinta Suuqa Waaheen
Tan iyo maalintii uu soo baxay baaqa Xukuumadda Somaliland ee ku saabsan Qaadhaan ururinta Suuqa weyn ee WAAHEEN Hargeysa, waxa daafaha dunida aad looga dareemay sida dadweynaha ka soo jeeda Somaliland ay u ayideen baaqaa. Arrintaasi waxay muujinaysaa sida Jaalliyadaha Somaliland ay ugu xidhan yihiin dalkooda, diyaarna ugu yihiin ka qayb qaadashada gurmadka iyo taakuleynta dadkooda iyo dalkooda.
Waxa meelo badan oo qaaradda Yurub ah si xammaasad waddanimo leh uga socda kulamo lagu lafagurayo habsami u socodka hawlaha qaadhaan ururinta ee suuqa WAAHEEN ee ku yaalla badhtamaha caasimadda.
Dalka Holland ayaa ka mid ah waddamada ay bulshada ku dhaqani sida weyn isku abaabuleyso oo magaalo walba dhinaceeda ka waddo dadaal xoog leh oo dhaqaale loogu ururinayo dadkii hantidooda ku waayey masiibadii ku habsatay suuqa weyn ee WAAHEEN.
Annagoo bogaadinayna dadaalka nafhuridda ah ee ay wadaan ururada iyo mutadawaciinta hawshan ku jiraa, waxan ku baraarujinaynaa inay la xidhiidhaan guddida Qaadhaan ururinta Suuqa WAAHEEN. Ugu dambeyn waxan kula dardaarmaynaa inay ku dadaalaan inay qaab hufan (transparent) ah ku hawl galaan dhaqaalaha ay soo ururiyaan ku shuubaan xisaabta (Account-yada) loogu tallagalay ee la soo cayimay.